‘Tsy ho adinoina mandrakizay ianao sy izao famoizana izao’: Ny asa mahafaty iainan’ny fampitam-baovao ao Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2018 6:24 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Français, русский, English
Nampodiana maty tao anaty fiara mitondra marary i Tokhi. Niara-dia taminy nandritra ny andro farany niainany ny mpiara-miasa aminy avy ao amin'ny TOLO T.V.
Tonga araka ny fanaon'ny hafa, nitondra fakantsary teny an-tanany, ilay mpanao vivery ny ainy. Efa tsy fantatra intsony ankehitriny ao Kabul izay mety ho namana na mety ho fahavalo.
Rehefa voalaza avokoa izany rehetra izany, miisa 26 ny olona namoy ny ainy tamin'ny fanapoahana baomba in-droa nitranga, saika azo lazaina hoe nisesy, teo amin'ilay toerana. Nilaza ho tompon'antoka tamin'ny fipoahana ny ISIS.
Notifirin’olon-tsy fantatra elaela taorian'izay tamin'io andro io ihany ny mpanao gazety fahafolo, mpitati-baovaon'ny BBC antsoina hoe Ahmad Shah, tany amin'ny faritanin'i Khost tany atsinanana no nisian'izany fitifirana izany, araka ny nolazain'ny BBC.
Mpiasa mahatokin'ny TOLO TV, fampielezam-baovao tsy miankina lehibe indrindra ao amin'ny firenena i Yar Mohammad Tokhi, 54 taona, hatramin'ny niodinany voalohany indrindra tamin'ny taona 2004. Ny handrakitra ny Afghan ao amin'ny fifaliany no asany, sy ny alahelony izay efa mahazatra loatra ihany koa moa.
Ary tsy nahatontosa ny fampanantenany ny peratra. Ity ny peratra vodiondrin'i Yar Mohammad, mpakasarin'i @TOLOnews, izay nampanantena fa hanambady ny fofombadiny amin'ny volana ambony. Anisan'ireo maty androany izy.
Efa niaritra fahafihana mahafaty olona tahaka izany ihany ny Tolo TV taloha. Tamin'ny Janoary 2016, notafihan'ny vondrona Taliban tao amin'ny fiasanan-dry zareo tao Kabul ry zareo ary fito ny mpiasa maty tamin'izany fotoana izany.
Lasibatra hafa voa tamin'io fanafihana io koa i Ghazi Rasuli, 26 taona, mpanangom-baovao avy amin'ny toby 1TV, izay miaraka amin'ny taranaka politisiana vao misandratra ao Afghanistan.
Raha toa mahazatra kokoa ho an'ny mpanao gazety tandrefana ny mahazo tambin-karama noho ireo loza mety hitranga amin'ny fiasana ao amin'ity firenena ity, dia miasa hahazo karama kely kokoa sady tsy misy fiantohana matetika ny Afghan mpanao gazety. Maty nandritra ny fipoahana ihany koa ny mpakasarin'ny 1TV antsoina hoe Nowroz Ali Rajabi.
Mpiara-miasa iray amin'Atoa Rasuli no nilaza tao amin'ny media sosialy fa tsy nandray ny karamany izy tao anatin'ny volana vitsivitsy:
Maty nandritra ny fipoahana ihany koa ny mpanangom-baovao sy ny mpaka sary avy amin'ny AFP sy ny Radio Free Europe. Anisan'ireo ny mpakasarin'ny AFP Shah Marai, ireo mpanao gazetin'ny Mashal TV toa an'i Saleem Talash sy i Ali Saleemi; ary ireo mpanao gazety Maharram Durrani, Sabawoon Kakar, Abadullah Hananzai avy amin'ny Azadi Radio, izay anisan'ny tohanan'i Radio Free Europe/Radio Liberty avy ao Etazonia.
Miangavy hevero ny hanome ho fanohanana ny fianakavian'i Yar Mohammad Tokhi.